ဂန္ထဝင်ပရိဘောဂ၊ ဂန္တဝင်ကုတင်နှင့်ဆိုဖာထုတ်လုပ်သူ | ဂျိမ်းစ်ဘွန်း
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းပရိဘောဂသည်အိမ်တွင်းပရိဘောဂများကို ၁၇ နှစ်ကြာအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
ဂန္ထဝင် Chaise Longue
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားမြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးဖြင့်ကျေနပ်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်တိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးယုံကြည်မှုရှိစေရန်သေချာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်စျေးကွက်မှလျှောက်လွှာများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်လူကြိုက်များခြင်းနှင့်အသုံးချခြင်းကိုအာမခံသည့်အင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။
ဂန္ထဝင်ဆိုဖာပရိဘောဂ James Bond 14k ရွှေနှင့်အစိုင်အခဲသစ်သားအညိုရောင် A2820 ဆိုဖာ
ဖော်ပြချက် Classic အညိုရောင် 14k gold နှင့် solid သစ်သားဆိုဖာ။ ထုတ်ကုန်အသေးစိတ် ပစ္စည်း: ပြင်သစ်бук \_ သားရေ \_ 14k ရွှေ \_ t ထိုင်ခုံတစ်ခု။ 135Wx105Dx117H ထိုင်ခုံနှစ်ခုံ 196Wx123Dx149H သုံးထိုင်ခုံ 255Wx123Dx149H လေးထိုင်ခုံ 302Wx123Dx149H
James Bond Classic လျှပ်စစ်စားပွဲခုံနှင့်စန္ဒရားသစ်စေးသုတ်ထားသောအစိုင်အခဲသစ်သား Brown JF522
ဖော်ပြချက် စန္ဒရားစေးနှင့်အတူဂန္ထဝင်ဘရောင်းရွှေနှင့်အစိုင်အခဲသစ်သား တတ်နိုင်သမျှလျှပ်စစ်ပတ်ပတ်လည်ထမင်းစားချိန်ဆေးသုတ် ထုတ်ကုန်အသေးစိတ် ပစ္စည်း ပြင်သစ်бук အရွယ်အစား: 220W × 220D × 76H × 300W × 300D × 300H × 380W × 380D × 76H သစ်သားအရောင်: ဘရောင်း
ဂန္တ ၀ င်ဆိုဖာပရိဘောဂ ၁၄ ခဲနှင့်ရွှေ၊ & ရှမ်ပိန် A2819 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း
ဖော်ပြချက် James Bond Classic ဆိုဖာပရိဘောဂ 14k gold နှင့် အစိုင်အခဲသစ်သားရွှေ & ရှမ်ပိန် A2819 ထုတ်ကုန်အသေးစိတ် ပစ္စည်း Frenchbeech \_ သားရေ \_ 14kgold ထိုင်ခုံပစ္စည်း သားရေ သားရေအရောင်: အညိုရောင် သစ်သားအရောင်: ရှန်ပိန်
James Bond Classic ဆိုဖာဒီဇိုင်း 14k gold နှင့် solid blue blue A2825
James Bond ပရိဘောဂများသည်ဇိမ်ခံကားမြင့်မားသောဂန္ထဝင်ပရိဘောဂများကို 18 နှစ်ကြာအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များက James Bond ပရိဘောဂများသည်အီတလီဂန္ထဝင်ပရိဘောဂများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည့်ဂန္ထီပရိဘောဂများကိုပြုလုပ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အကောင်းဆုံးအီတလီဂန္ထဝင်ပရိဘောဂ၏ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့နှင့်ဒီဇိုင်းအသင်းကိုအီတလီသို့တစ်နှစ်လျှင်အီတလီသို့ပို့သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဂန္ထဝင်ဆိုဖာအစုံသည်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အသေးစိတ်ကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်။ နူးညံ့သောခံစားမှု, ဇိမ်ခံခံစားမှုနှင့်ဂန္ထဝင်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏ထုတ်ကုန်လောကတွင်အပြည့်အ ၀ စွဲမြဲစွာရောက်နေသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရုံကဏ္ sector ၏တိကျသောအင်္ဂါရပ်များစိမ်မ; ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ ၀ ယ်ယူသူများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစေသည့်အရာမှာ - "ငါတို့သည်အဘယ်သို့စားသုံးသူရဲ့ဝယ်ယူမှုအလိုဆန္ဒဖြစ်ပေါ်?" ဒါကမင်းတို့နဲ့မင်းလုပ်မှာပါ။ ဤအရာသည်သင်၏စီမံကိန်းကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံကိန်းသို့မည်သို့ပြောင်းလဲစေသနည်း။
လှပပြီးဇိမ်ခံသော Villas သည်အရသာရှိသည့်ဂန္ထဝင်ပရိဘောဂများနှင့်အတူတူပါတီနှင့်အတူတူပင်ဇိမ်ခံကားများနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။ နိုင်ဂျီးရီးယားဖောက်သည်များကြောင့်ဂျိမ်းစ်ဘွန်းပရိဘောဂများကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် 36 နှစ်တာကာလရှိသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရင့်ကျက်ပြီးအရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းသည်။James Bond ပရိဘောဂများ၏ဂန္ထဝင်ပရိဘောဂများကိုနိုင်ငံပေါင်း 35 နိုင်ငံသို့ရောင်းချပြီးလှပသောမိသားစု 5000 ကိုနိုင်ငံပေါင်း 35 နိုင်ငံသို့ရောင်းချသည်။ James Bond ပရိဘောဂများသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိထိပ်တန်းဂန္ထဝင်ပရိဘောဂအမှတ်တံဆိပ် 10 ခုနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းဂန္ထဝင်ပရိဘောဂအမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်လာသည်။ ဖောက်သည်များသည် James Bond အရည်အသွေးမြင့်သောဂန္ထီပရိဘောဂများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
အီတလီဖောက်သည် Villa Classic ပရိဘောဂ - ဂျိမ်းစ်ဘွန်းပရိဘောဂများမှ
ကျွန်ုပ်တို့၏ James Bond ပရိဘောဂများအပေါ်၎င်းတို့၏ထောက်ခံမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်အီတလီဖောက်သည်များအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂန္ထဝင်ပရိဘောဂများထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အလွန်အတွေ့အကြုံများရရှိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် 18 နှစ်ကုန်ရေးအတွေ့အကြုံရှိပြီး, အီတလီထုတ်လုပ်မှုစက်များနှင့်အီတလီထုတ်လုပ်မှုစက်များနှင့်အီတလီထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာစံပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပတ်0န်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပန်းချီကားကို အသုံးပြု. အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းကိုအသုံးပြုသည်။James Bond ပရိဘောဂများသည်ယခုအချိန်တွင်ပိုမိုများပြားသောနိုင်ငံများတွင်ယခုအချိန်တွင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောဂန္ထဝင်ပရိဘောဂများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
တောင်အာဖရိကအရည်အသွေးစီမံကိန်း - ဂျိမ်းစ်ဘွန်းပရိဘောဂများမှဇိမ်ခံဂန္ထဝင်ပရိဘောဂများ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့တောင်အာဖရိကဖောက်သည်တွေကိုသူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့သူတို့ရဲ့ Jameson ပရိဘောဂတွေအတွက်အထောက်အပံ့နဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါဂန္ထဝင်ပရိဘောဂများကို James Bond ပရိဘောဂများမှပေးထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားသောဂန္ထဝင်ပရိဘောဂများကိုနိုင်ငံပေါင်း 35 နိုင်ငံမှရောင်းချခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျိမ်းစ်ဘွန်းပရိဘောဂများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂန္ထဝင်ပရိဘောဂများကိုအရသာနှင့် texture တို့နှင့်အတူနိုင်ငံများတွင်ဖောက်သည်များပိုမိုများပြားသောဖောက်သည်များပိုမိုခွင့်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားနေကြသည်။
ဟောင်ကောင်သုံးစွဲသူစီမံကိန်း - ဂျိမ်းစ်ဘွန်းပရိဘောဂများမှအရည်အသွေးမြင့်မားသောဂန္ထဝင်ပရိဘောဂ
ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးသောရည်ရွယ်ချက်စွမ်းအားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးနှင့်အတူစံပြပရိဘောဂများထုတ်လုပ်ခြင်း, ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့အားဖောက်သည်များက ပေး. အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသော, တန်ဖိုးရှိသော, အဖိုးတန်သော,James Bond ပရိဘောဂများသည် 36 နှစ်သမိုင်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသည်ရင့်ကျက်သောနည်းပညာကိုရင့်ကျက်လာပြီးအဆင့်မြင့်သောဂန္ထဝင်ပရိဘောဂများကိုရွေးချယ်ခြင်း,
James Bond ပရိဘောဂများကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးအမျိုးသားပရိဘောဂထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း - Longjiang မြို့၊ shunde ခရိုင်၊ foshan မြို့၊ squareရိယာအကျယ်အ ၀ န်းစတုရန်းမီတာ ၅၀,၀၀၀ ကျော် covering ကျယ်ဝန်းပြီးဥရောပဂန္ထဝင်ဆိုဖာများထုတ်လုပ်သည့်အဆင့်မြင့်အိမ်၏ရောင်းအားကိုရောင်းချသည်။ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများမှ၊ စားပွဲ၊ လက်ဖက်ရည်စားပွဲစီးရီးများ။ James Bond သည် (၁၆) နှစ်လုံးလုံးကျင့် ၀ တ်စံနှုန်းများကိုလိုက်နာသည်။ စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစံနှုန်းများကိုလက်ခံကျင့်သုံးခြင်း၊ ချေးငွေလုပ်ငန်း "၊ " ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်အား ၁၅ နှစ်ဆက်တိုက်စာချုပ်များနှင့်ချေးငွေလုပ်ငန်းများကိုလိုက်နာရန် "" တရုတ်ပရိဘောဂများ၏ထိပ်တန်းဥရောပနှင့်အမေရိကန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် "ခေါင်းစဉ်။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းပရိဘောဂများကိုအီတလီမှ အစပြု၍ မြင့်မားသောအရည်အသွေးကိုရရှိရန်ရိုးရာသွေးများကိုအသုံးပြုသည်။ ရိုးရာဓလေ့များကိုတင်းကြပ်စွာရွေးချယ်သည်။ စင်ကြယ်သောသဘာဝသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်နံရံမှတောက်ပ။ တောက်ပသောစန္ဒရားဆေးသုတ်သည့်မျက်နှာပြင်၊ အဖိုးတန်သောနှင့်ရှားပါးသောမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ... ပရိဘောဂသည်အိမ်ကိုအလှဆင်သည့်လှပသောကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်လာစေမည်။ လက်မှုပညာသည်ဂျိမ်းစ်ဘွန်းသည်ရာစုနှစ်များစွာအနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုအမွေဆက်ခံခဲ့ပြီးအနုပညာဖန်တီးမှုကိုစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ ပေး၍ ပြီးပြည့်စုံသောအနုပညာလက်ရာများဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းသည်။